သေးငယ်သော်လည်း တန်ခိုးကြီးသည်- Dutchtown တွင်ရောင်းရန် • DutchtownSTL.org • Dutchtown၊ St. Louis, MO
သေးငယ်သော်လည်း တန်ခိုးကြီးသည်- Dutchtown တွင်ရောင်းရန်ရှိသည်။
အပေါ် Posted အောက်တိုဘာလ 31st, 2021
သင့်ကိုယ်ပိုင်ခေါ်ဆိုရန် သက်တောင့်သက်သာရှိသော နေရာရှာနေပါသလား။ Dutchtown တွင် သင့်တင့်မျှတသော အရွယ်အစားရှိသော နေရာအား ရှာဖွေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်သည် ခိုင်ခံ့စွာတည်ဆောက်ထားသော သမိုင်းဝင်အိမ်ရာ၊ အဆင်ပြေသောတည်နေရာ၊ ဖော်ရွေသော အိမ်နီးချင်းများနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော အနာဂတ်များဖြင့် သင့်အတွက် အထစ်အငေါ့ဆုံးဖြစ်စေပါသည်။
အောက်တွင် စျေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး ကျိုးနွံအရွယ်အိမ်များအတွက် Zillow တွင် လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့်စာရင်းအချို့သာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် Dutchtown မှာ လူတိုင်းအတွက် တစ်ခုခုရှိတယ်။ သေးငယ်သည်ဖြစ်စေ ကြီးသည်ဖြစ်စေ ရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိစာရင်းများကို ရှာဖွေကြည့်ရှုရန် သေချာပါစေ။ Dutchtown ကြီးမြတ်စေသောအရာကိုလေ့လာပါ။.
ဤဂန္ထဝင်အုတ်အိမ်သည် သေးငယ်ပုံရသော အထုပ်တစ်ခုတွင် များစွာပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အဖွင့်အထပ်အစီအစဥ်များနှင့် သပ်ရပ်လှပသော မြေအောက်ခန်းတို့ကြောင့် အိပ်ခန်းသုံးခန်းနှင့် ရေချိုးခန်းအပြည့် နှစ်ခန်းကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် သင်သည် Meramec တစ်လျှောက်ရှိ Downtown Dutchtown ရှိ ဈေးဆိုင်များနှင့် စားသောက်ဆိုင်များမှ ခြေလှမ်းအနည်းငယ်သာဝေးသည်။
ဗိသုကာပညာအရ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည်၊ ဤသေးငယ်သော်လည်း ခံ့ညားထည်ဝါသော အိပ်ခန်းနှစ်ခန်း/ရေချိုးခန်းအိမ်သည် မူရင်းကြိတ်ထည်များ၊ အိတ်ကပ်တံခါးများ၊ မြင့်မားသောမျက်နှာကျက်များနှင့် အနောက်ဘက်တွင် ကုန်းပတ်ကြီးတစ်ခုပါရှိသည်။
Grand ၏အနောက်ဘက်ရှိ ဤအိပ်ခန်းနှစ်ခန်း/ရေချိုးခန်းနှစ်ခန်းရှိ ဘန်ဂလိုတွင် သမိုင်းဝင်နှင့် ခေတ်မီသောပေါင်းစပ်မှုကို ရှာဖွေပါ။ သစ်မာကြမ်းပြင်များ၊ ရောင်ခြယ်ပြတင်းပေါက်များနှင့် အလှဆင်မီးဖိုများသည် ကမ္ဘာဟောင်းကို ကျက်သရေရှိစေသော်လည်း ပြောင်လက်တောက်ပသော မီးဖိုချောင်အသစ်သည် အဆင်ပြေမှုနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းသည်။ ဤအိမ်တွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြီးသွားသည့် မြေအောက်ခန်းနှင့် အကြီးစား ကားတစ်ခန်းပါရှိသော ကားဂိုထောင်တစ်ခု ပါရှိပါသည်။
အလှဆင်မီးဖို၊ အိတ်ဆောင်တံခါး၊ မူရင်းသစ်သားလက်ရာနှင့် အခြားအရာများပါရှိသော ဤတောက်ပပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော အိပ်ရာနှစ်ခန်း/ရေချိုးခန်းနှစ်အိမ်အား စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ခြံခတ်ထားသော အိမ်နောက်ဖေးဆီသို့ ဦးတည်နေသော ကုန်းပတ်ကြီးတစ်ခုလည်း ရှိသည်။
ဤအိပ်ခန်းသုံးခန်း/ရေချိုးခန်းအိမ်တွင် လှပသောအလှဆင်မီးဖိုနှင့် ဧည့်ခန်းနှင့်တရားဝင်ထမင်းစားခန်းကို ပိုင်းခြားထားသော ဗီရိုများအပြင် ပြောင်လက်တောက်ပသောခေတ်မီမီးဖိုချောင်တစ်ခုပါရှိသော အသားတုံးကောင်တာများနှင့် ရေချိုးခန်းအတွင်းရှိ ဂျက်စည်တစ်ခုပါရှိသည်။
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် အောက်တိုဘာလ 31st, 2021 .
ဒိန်းမတ် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သေးငယ်သော်လည်း တန်ခိုးကြီးသည်- Dutchtown တွင်ရောင်းရန်ရှိသည်။